Kitra – «Poule des As 2018»: hanala vela amin’ny Cnaps Sport ny Elgeco Plus | NewsMada
Kitra – «Poule des As 2018»: hanala vela amin’ny Cnaps Sport ny Elgeco Plus
Hiditra amin’ny lalao miverina ny «poule des As», dingana farany amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina ktira. Hangotraka avokoa ireo lalao roa, eo amin’ny andro voalohany.
Hanomboka asabotsy, hitohy rahampitso alahady, ny lalao miverina eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara. Ekipa efatra no hiady izay ho lohany, amin’izany. Lalao roa lehibe no hanamarika ity fihaonana ity. Ny fihaonana voalohany, hotanterahina ,anio, asabotsy, etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina.
Fihaonana, hikatrohan’ny Elgeco Plus Analamanga sy ny Cnaps Sport Itasy. Tsy maintsy hitady fandresena, amin’izay ny ekipan’Analamanga, amin’ity, izay tsy mbola manana isa mihitsy ary mitana ny laharana farany. Hanala vela rahateo izy ireo, satria resin’Itasy, teo amin’ny fihaonana mandroso.
Nahatonga ny fisarahan’ny mpanazatra sy ny ekipa mihitsy io vokatra ratsy azon’ny Elgeco Plus, teo amin’ny lalao mandroso, io. Na kely aza ny herijika handrombahan’izy ireo ny ho tompondaka, tsy maintsy hiady mba hahazo fandresena, ho voninahitry ny ekipa.
Etsy an-kilany, hanao izay ho afany ihany koa ny Cnaps Sport, haka isa 3, hahatsara toerana azy, eo amin’ny laharana faharoa ankehitriny, ary manana isa 6.
Any amin’ny kianja Rabemananjara Boeny indray, rahampitso no hifandona ny FCV Vakinankaratra sy ny Fosa Jr Boeny. Heverin’ny rehetra fa ho sarotsarotra amin’ny ekipan’Antsirabe, ny handavo ny Fosa Jr, ao an-kianjany. Tombony ho an’ny Fosa Jr, ny fahazarany milalao eo amin’ilay bozaka artifisialy sy ny toetrandro, misy any an-toerana.
Tsy hanaiky mora foana anefa ny FCV, izay ekipa nahavita dingana goavana tamin’ity fifaninanam-pirenena ity.
Raha tsiahivina, nisaraka ady sahala 1 sy 1 ny roa tonta, nandritra ny lalao mandroso, natao tany amin’ny kianja Vélodrome, tapa-bolana lasa izay. Marihina fa mbola mitarika eo amin’ny filaharana, manana isa 7 ny Fosa Jr ary fahatelo, manan isa 4 ny FCV Vakinankaratra.